​इन्टरप्राइज नेपालले एनएमबी बैङ्कसँग बैङ्किङ साझेदारी गर्ने
काठमाडौ । टू नर्थ एसोसिएट्सद्वारा लगानी तथा व्यवस्थापन गरिएको इन्टरप्राइज नेपाल विजनेश एक्सिलेरेटर कार्यक्रम र एनएमबी बैङ्कबिच बैङ्किङ कारोबारमा साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ । साझेदारीअनुसार एनएमबी बैङ्कले आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी..
धनगढीमा सेवाग्राहीलाई बिहानै बैंकिङ सेवा, १० दिनदेखिको निषेधाज्ञाले बैक वित्तीय सस्था खुलेनन्
धनगढी । यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको समयअघि बिहानको समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न थालेका छन् । टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि स्थानीय प्रशासनले १० दिनदेखि लगातार जारी निषेधाज्ञाका कारण बैंकिङ..
सानिमा बैङ्कले गतबर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत बोनश शेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सानिमा बैङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत बोनश शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्र बैङ्कले..
​सिटिजन्स बैंकले २० प्रतिसत बोनस दिने, लाभांस घोषणा गर्ने पहिलो बैंक
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले लगानीकर्तालाई २० प्रतिसत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले बुधबार लाभांस घोषणा गरेको हो । यस पटक लाभांस घोषणा गर्ने यो पहिलो बैंक हो..
मकवानपुर जिल्लाका सहकारीमा एक अर्ब बचत
हेटौंडा । विभिन्न सहकारी संस्थाले हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ बचत गरेका छन् । सहकारीले जम्मा गरेको बचत स्थानीय समुुदायमा आयआर्जनका लागि परिचालन गरिएको छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय मकवानपुरले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा..
​सिद्धार्थ बैंकको एसडिबिएल सुुरक्षित घर योजना, बिमाका लागि सिद्धार्थ र प्राइम बीच सम्झौता
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले घरकर्जा लिने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै न्युनतम ब्याजदरमा एसडिबिएल सुुरक्षित घर योजना ल्याएको छ। यो योजनामा ऋणीको बिमा समेत हुने सिद्धार्थ डेभलपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत..
​इजी लिंक रेमिट र ज्योती बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौ । इजी लिंक रेमिट्यान्स र ज्योती विकास बैंकबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा इजी लिंक रेमिट्यान्सका प्रबन्धक दीपेन्द्र खनाल र ज्योती विकास बैंकका प्रमुख ट्रेजरी अपरेशन..
​ग्लोबल आईएमईको ८८ औं शाखा थानकोटमा
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले काठमाडौंको थानकोटमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । ग्लोबल बैंकको यो ८८औं शाखा हो । ग्लोबल आइएमई बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सोमबार शाखा..
​तिनाउ विकास बैंकको सञ्चालक समितिले सीइओमा पुनः श्रेष्ठ
बुटवल । तिनाउ विकास बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति गरेको छ । श्रेष्ठसँग बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकीय तहमा १७ वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । रुपन्देही,..
​लुम्बिनी बैंकको बानेश्वर शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौँ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले नयाँ बानेश्वर स्थित शाखा कार्यालय सोही स्थानमा अवस्थित नयाँ भवनमा आजदेखि स्थानान्तरण गरेको छ । उक्त नयाँ भवनको उद्घाटन बिहीबार बैंकका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्री प्रकाश..
​स्टायण्डर्ड चार्टड बैंकको शाखा बौद्धमा
काठमाडौं । स्टायण्डर्ड चार्टड बैंकले बौद्धमा नयाँ साखा खोलेको छ। बौद्धको भाटभटेनीनजिक नयाँ शाखा खोलिएको बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बैंकका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोसेफ सिल्भानुसले बौद्ध स्थित..
बेष्ट रेमिट र सिर्जना फाइनान्सबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउदै आएको बेष्ट रेमिट नेपालले विराटनगर मुख्य कार्यालय रहेको सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडसँग रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्वन्धी सम्झौता गरेको छ । सो सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा बेष्ट रेमिटका..
​सिनर्जी फाइनान्स राष्ट्र बैंकको कार्वाहीमा, लाभांश र बोनस दिन रोक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई सुधारात्मक कारबाही स्वरुप व्यवसाय विस्तार र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । संस्थाको पुँजी..
​‘सेञ्चुरी बैङ्क सुपर सिक्स’ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै
काठमाडौँ । आगामी असोज ९ देखि १३ गतेसम्म दोस्रो सेञ्चुरी कर्पोरेट बैङ्क सुपर सिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता राजधानीमा सञ्चालन हुने भएको छ । एसएस इभेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन..
​ग्लोबल आइएमई बैङ्कको नयाँ शाखा ग्वार्कोमा
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले बुधवार देखि ललितपुरको ग्वार्कोमा आफ्नो ८७ औँ शाखा विस्तार गरेको छ । ग्वार्कोको शाखासँगै काठमाण्डौं उपत्यका भित्र ग्लोबलका ३० ओटा शाखा पुगेका छन् । हालसम्म..
​प्रभु बैंकको कर्जा जीवन बीमा योजना
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्ना कर्जा ग्राहकको सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । यो योजनामा घरकर्जा तथा सवारी साधन कर्जाका ग्राहकहरु सहभागी हुन सक्ने बैंकले जनाएको..
​मलेशियाबाट सुलभ रेमिटमार्फत पैसा पठाउन सकिने, एनमबि बैंक र सीबीएलबीच सम्झौता
काठमाडौं । एनएमबि बैंक र सीबीएल मनि ट्रान्सफरबीच मलेशियाबाट नेपालमा सुलभ रेमिटमार्फत पैसा पठाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि मलेशियामा रहेका नेपालीहरुले सीबीएलबाट सुलभ रेमिटमार्फत नेपालभर पैसा पठाउन सक्नेछन् । सम्झौतापत्रमा..
​लुटेराको आक्रमणमा दुई युवती गम्भीर घाइते
कावासोती । लुटेराको आक्रमणमा परी दुईजना युवती गम्भीर घाइते भएका छन् । तनहुँको गजरकोट–७ घर भई नवलपरासीको कावासोती–३ डम्बरबहादुर चोकस्थित पदमबहादुर दाहालको घरमा डेरा गरी बस्ने दुई दिदीबहिनीलाई लुटेराले अचेत हुने..
​स्वामी प्रपन्‍नाचार्यको ९२ बर्षको उमेरमा पशुपति मृगस्थलीमा निधन
काठमाडौं । स्वामी डा. प्रपन्‍नाचार्यको निधन भएको छ । आज बिहान पशुपतिको मृगस्थलीमा ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। स्वामी प्रपन्‍नाचार्यको शरीर श्रद्धाञ्‍जलीका लागि पशुपति मृगस्थलीमा राखिने भएको छ। उनको जन्‍म..
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक डुबाउने भाइकृष्ण खड्का पक्राउ साढे तीन करोड असुल गर्न बाँकी
काठमाडौं । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स डुबाउने फरार प्रतिवादी भाइकृष्ण खड्का आज पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सान्दर्भिक विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक काठमाडौं गागलफेदीका ४५ वर्षका खड्कालाई..
​सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र युनियन फाइनान्सको कारवाही फुकुवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्घार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई गरेको सुधारत्मक कारबाही फुकुवा गरेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आवश्यक न्यूनतम पूँजीकोष रहेको विवरण पेश गरेपछि राष्ट्र बैंकको गत श्रावण २८ गतेको..
हिमालयन बैंकको नाफा १ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बैकको खुद नाफा १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँले..
​सेञ्चुरी बैंकको नाफा १७ करोड, अघिल्लो बर्ष भन्दा १ सय ९६ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रतिशेयर आम्दानी १ सय ९६ दशमलव ८२ प्रतिशत तथा खुद नाफा पनि १ सय ९६ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो..
​कृषि विकास बैंकको एक अर्ब ८७ करोड रुपैंयाँ नाफा
काठमाडौं । गतआर्थिक बर्षमा कृषि विकास बैंकको प्रति शेयर आम्दानी भने ४ रुपैंयाले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ४७ रुपैंयाँ ५३ पैसा रहेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी गत आर्थिक बर्षमा..
रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको मुनाफा ९४ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा उच्च नाफा हाँसिल गरेको छ । यो अबधिमा बैंकले १४ करोड ३० लाख संचालन मुनाफा गरेको बित्तिय बिबरण प्रकाशन गरेको छ..
​नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । जीबन बीमाको कारोबार गर्दै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष १८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ..
​महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने सम्झौता
काठमाडौं । महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाबीच भएको सम्झौतामा महालक्ष्मीका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी र अल्पाइनका..
​शिखर इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी ६९ रुपैंया
काठमाडौं । निर्जीवन कम्पनीमा अग्रणीस्थानमा रहन सफलता हासिल गरेको शिखर इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड रुपैंयाले बढी खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा..
​प्रभु बैंकको शाखा सन्धिखर्कमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आइतवारदेखि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आफ्नो शाखा संचालनमा ल्याएको छ। मर्जरको क्रममा दोहोरिन गएको घोराही दाङको शाखालाई स्थानान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जानकारी गराएको छ। बैंकका संचालक श्री पुष्पबहादुर..
यती डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । यती डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सान व्यहोरेको..
Results 1896: You are at page 54 of 64